Child – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
Healthy Life Journal အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy Life ဂျာနယ်တွင် ကင်ဆာကုသအောင်မြင်ထားသူများ အကြောင်း လေးစားဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၏စိတ်ထဲတွင်” ကင်ဆာဆိုတာ သေမိန့်” ၊ “ ကင်ဆာဖြစ်ရင် ဆေးမရှိ” ၊ “ ကင်ဆာဖြစ်ရင် ဘ၀နိဂုံးအချိန်ရောက်ပြီ”...
အသက်ငါးနှစ်အောက်ကလေးများ အစားအသောက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ကလေးတွေကို အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ တချို့အမေတွေကျတော့လည်း ကလေးကို အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ထိ နို့တိုက်တာရှိပါတယ်။ ဒီလိုကျတော့လည်း မကောင်းပြန်ပါဘူး။ မလိုပါဘူး။...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မနှစ်က သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ဖူးသူတွေအနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသလား ဆရာ။ ဖြေ. သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပြန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ပြန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ အဲဒီလို...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ကလေးတွေမှာ မျက်မှန်တပ်ဖို့လိုတာက ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ကလေးတွေမှာ မျက်မှန်တပ်ဖို့လိုအပ်တာက မျက်စိမှုန်တာကြောင့်ပါပဲ။ လူတွေထင်နေကြသလို ကလေးတွေမှာ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် မျက်မှန်တပ်ရတာမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး...
မိဘများက ညဘက်တွင် ကလေး၏ ဖုန်းများယူထားပြီး နှိုးစက်နာရီ ၀ယ်ပေးထားသင့်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတို့ ပြောဆို
၊ ကိုထက် ၊ ညဘက်မှာ မိဘတွေက သားသမီးတွေရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကိုယူထားသင့်ပြီး ဈေးပေါတဲ့ နှိုးစက်နာရီတစ်လုံး ၀ယ်ပေးထားသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ညဉ့်နက်တဲ့အထိဖုန်းသုံးတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ဆယ်ကျော်သက်တွေက နားလည်မှုမရှိကြဘူးလို့ ဘက်တ်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခအဒမ်က ဆိုပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အခန်းထဲမှာ...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းမှာ သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အာဟာရရဲ့အခန်းကဏ္ဌက အရေးကြီးပါတယ်။ နံနက်စာ ကိုပုံမှန်စားတဲ့ ကလေးတွေက နံနက်စာကိုမစား သူတွေထက် ကျောင်းစာမေးပွဲတွေမှာ ရလဒ်ကောင်းကောင်းရရှိတာ၊ အပြုအမူကောင်းမွန်တာ နဲ့ တက်ကြွလွန်မှုလျော့နည်းတာတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။ အရေးကြီးလှသည့်နံနက်စာ...